Sida loo hagaajiyo GIF: cashar gaaban oo sharraxaad ah si loo horumariyo GIF | Hal-abuurka khadka tooska ah
Sida loo hagaajiyo GIF
Nerea Morcillo | 06/05/2022 17:00 | General, Tababarada
Xigasho: Spartan Geek
Mar kasta oo aan uga jawaabno fariinta si xiiso leh oo firfircoon, waxaan isticmaalnaa nooc ka mid ah qaabka horeba ugu badan dadka isticmaala codsiyada sida WhatsApp ama xitaa shabakadaha bulshada sida Twitter ama Facebook.
Qormadan waxaan kuugu nimid inaan kaala hadalno qaabka GIF, oo ah qaab in muddo ah ku jiray moodada oo ka mid ah kuwa la falgala oo dhex mara internetka. Haddii aad sidoo kale ka mid tahay dadka aan joojin karin ka jawaabista fariimaha qaabkan leh, waxaad leedahay nasiib, sababtoo ah waxaan ku tusin doonaa cashar yarl ku saabsan sida loo hagaajiyo GIF si degdeg ah oo fudud.
Intaa waxaa dheer, waxaan ku tusi doonaa siyaabo kala duwan sida loo sameeyo, haddii ay dhacdo in aad leedahay qalab qaar ka mid ah sida Photoshop
1 Qaabka GIF
2 Tababarka: Sida loo hagaajiyo GIF
2.1 Habka 1: Iyadoo Photoshop
2.2 Foomka 2: Online
3 Mareegaha si loo soo dejiyo GIF
3.1 Sawirada Google
Xigasho: Dhaqanka SEO
Qaabka GIF waa nooc ka mid ah qaabka sawirka laakiin is dhexgal, taasoo la macno ah, waxay awood u leedahay inay dib u soo saarto sawirka dhowr ilbiriqsi gudahood, kuma jirto dhawaaqa soo saarista oo cabbirka ay ka kooban yihiin aad ayuu uga yar yahay faylasha PNG ama JPG.
Waa qaabab inta badan lagu matalo warbaahinta internetka ee kala duwan sida shabakadaha bulshada. Waxa kale oo lagu gartaa in ay aad u qanciyaan, taas oo ah. Waxay u gudbiyaan shucuurta iyo dareenka si cad oo kooban. Faahfaahin aad u xiiso badan.
Dhanka kale, haddii aan ka hadalno suuq-geynta, waxaan dhihi karnaa waa canaasiir soo saara tiro badan oo booqasho ah, maadaama ay soo jiitaan dareenka dadweynaha. Intaa waxaa dheer, inta badan waa xubno maamula si ay u gaaraan tiro badan oo dhagaystayaal ah, marka haddii aad naftaada u hurto ama aad ka shaqeyso shabakadaha bulshada qaarkood, waxaad isticmaali kartaa cunsurkan si aad u siiso ahmiyad iyo caannimo profile kaaga.
Waa curiye sidaan soo sheegnay soo jeedi dareenka dadweynaha, markaa aad bay faa'iido ugu leeyihiin ganacsigaaga internetka. Sidoo kale, maadaama ay miisaankoodu fudud yahay, waxaad isticmaali kartaa inta aad rabto, maadaama ay yihiin faylal la cufan si loogu isticmaalo.
Waa qayb ka mid ah aduunka isdhexgalka maadaama ay ka samaysan yihiin muuqaalo taxane ah oo soconaya 5 ilbiriqsi. Faahfaahin soo jiidata dareenka badan tan iyo Uma baahnid wax badan si aad u sheegto waxa aad rabto inaad u sheegto.
Hadda, waad diyaar bogag kala duwan oo shabakad ah oo aad ka heli karto waxa ugu fiican ama kan ugu xiisaha badan oo awood u leh inuu soo dejiyo. Shaki la'aan, waa faa'iido maadaama aad ka heli karto dhammaan noocyada kala duwan ee qaybaha iyo dareenka, dhab ahaantii Twitter waxay horey u leedahay maktabad GIFS.
Ugu dambeyntiina, waa mid xiiso leh iyo sidoo kale muhiim ah in la ogaado nooca GIF waa kan ugu habboon munaasabad kasta, tusaale ahaan, haddii aad ka hadlayso ciyaaraha ama mawduuc kasta oo la xiriira ciyaaraha isboortiga, waxaa xiiso leh in la naqshadeeyo GIFS ama loo raadiyo si ay u wadaagaan mawduuc isku mid ah. Waa tafaasiil, muuqaal ahaan, aad u kobcinaya. Intaa waxaa dheer, mar kasta oo kumanaan iyo kumanaan fanaaniin ah ay ku biiraan isbeddelkan, isbeddelkaas oo maalin kasta soo saara malaayiin iyo malaayiin daawadayaal ah oo sidoo kale qayb ka ah shabakadda.
Tababarka: Sida loo hagaajiyo GIF
Xigasho: Podcast Industry
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo lagu cadaadiyo GIF. Si tan loo sameeyo, waxaanu ku tusi doonaa laba siyaabood oo kala duwan oo aad u samayn karto. Haddii aad haysato qalab Photoshop, doorashada ugu horreysa waxay noqon kartaa mid aad kuu xiiso badan.
Dhanka kale, haddii aadan haysan Photoshop, ha welwelin sababtoo ah waxaan dejinay nooc ka mid ah qorshaha B. Waa mid aad u fudud oo Waxaad arki doontaa in talaabooyin fudud aad awood u yeelan karto inaad sameyso iyada oo aan wax dhibaato ah dhicin.
Hagaajinta GIF aad bay faa'iido u leedahay haddii aad marar badan la shaqeyso qaabkan oo kale, kaas oo noqda mid faa'iido leh.
Habka 1: Iyadoo Photoshop
Xigasho: Aad Computer
Kahor intaadan bilaabin, waxaa muhiim ah inaad ogaato in, haddii aadan haysan Photoshop, aad ku rakibi karto nooca tijaabada aaladdaada oo aad bilowdo inaad sameyso. Waxa aad haysataa ugu badnaan 7 maalmood oo aad isku daydo waxaana laga yaabaa in aad u hesho mid xiiso badan.
Waxa ugu horreeya ee aan ku sameyn doono kiiska la'aanta, waa in la rakibo. Marka aan rakibno, waxaan sii wadi doonaa si aan u socodsiino ama u furno codsiga qalabkayaga. Marka la furo, kaliya waa inaan dooranaa GIF-ka aan rabno inaan ku cadaadinno, waxaan ka soo dejisan karnaa intarneedka haddaynaan mid weli haysan ama si fudud uga raadi maktabadda faylka.
Si aad u bilowdo tayaynta barnaamijka waxaan aadi doonaa doorashada de Diiwaankaka dib waan aadi doonaa dhoofin iyo ugu dambeyntii waxaan siin doonaa ikhtiyaarka ah kaydi shabakada
Marka uu daaqadu furmo, waxa kaliya oo aanu ku qasbanaan doonaa in aanu wax ka bedelno qaybo ka mid ah sida midabada iyo, ka sarreeya, cabbirka sawirka aan rabno in aanu bixino. Haddaba, maareeyaan si ay u yareeyaan cabbirka sawirka iyo sidoo kale miisaankiisa, tan iyo markii sawirka weyn, sidaas darteed, waa ka culus yahay.
Waxaan sidoo kale haysanaa qaar ka mid ah goobaha sare sida xulashada dejinta shabakada iyo tayada hoose ee tayada. Sidan waxaad sidoo kale maareysaa inaad hoos u dhigto tayada iyo sidaas awgeed sidoo kale miisaanka faylka.
Marka aan dhammeyno hagaajinta GIF-kayaga, waxa aan sameyno waa inaan ku keydinnaa aaladdayada, tan waa inaan u jiheynaa ventana, oo guji ikhtiyaarka badbaadi.
Xusuusnow inaad ku kaydiso faylashaada meel qalabkaaga ku yaal oo ay fududahay in la helo. Waxaan kugula talineynaa inaad had iyo jeer ku badbaadi iyaga marka hore, miiska, habkan ma adkaan doonto in hadhow la helo.
Waxaan rajaynaynaa inay ku caawisay.
Foomka 2: Online
Habka labaad waa in lagu sameeyo online, taas awgeed waxaan ku dhejinay liiska, bogga internetka ee isticmaalayaasha badani ay isticmaalaan si ay u cadaadiyaan ama u beddelaan faylasha. Aad bay faa'iido u leedahay maadaama aan inta badan ka tagno daqiiqad kale falalka noocan oo kale ah, iyada oo aan la ogeyn, si degdeg ah oo fudud ayaa loo samayn karaa.
Iloveimg waa bog internet ah iyo aalad aad u wanaagsan oo lagu beddelo faylasha JPG, GIF ama xitaa PNG.
Si tan loo sameeyo, kaliya waxaad u baahan doontaa inaad ka raadiso browserka, guji xiriiriyaha ugu weyn, iyo interface-keeda, mar kale guji ikhtiyaarka xulo sawirro. Marka la doorto waa inaan bixinaa oo kaliya cadaadi sawirada, iyo barnaamijka laftiisa si toos ah u fulinaya ficilka.
Mareegaha si loo soo dejiyo GIF
Tani shaki la'aan waa ikhtiyaarka ugu badan ee ay adeegsadaan isticmaalayaashu, waxaad ka heli kartaa sawirro nooc kasta ah oo wata erey fure ah oo ku jira browserka ugu fiican ee internetka oo dhan. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale ku daraysaa calaamado sare oo kala duwan si aadan u seegin wax aad raadineyso.
Waxaad haysataa dhammaan noocyada qaybaha, kaliya waa inaad doorataa midka aad jeceshahay oo si toos ah Boqolaal GIFS firfircoon ayaa ka soo muuqan doona shaashaddaada.
Waa mid ka mid ah aaladaha khadka tooska ah ee ugu dhameystiran marka ay timaado raadinta GIFS-ta firfircoon ee xiisaha leh. Si aad si fiican u fahamto, waa nooc ka mid ah meel aad ku dhejin karto kuwa aad naqshadeysay, ama xitaa ka soo dejisay internetka, isla markaana, waxaad kala soo bixi kartaa kuwa isticmaala kale. Aynu nidhaahno waa sida nooc ka mid ah shabakada bulshada, laakiin ku salaysan kaliya GIFS.
Intaa waxaa dheer, waa in sidoo kale lagu daraa in gif kasta oo aad soo dejiso uu ka kooban yahay calaamado taxane ah si aadan waxba u dhaafin.
Giphy waxaa loogu talagalay isticmaaleyaasha internetka, goobta ugu muhiimsan uguna xiisaha badan si loo helo GIF-yada ugu fiican. Mid ka mid ah faahfaahinta ugu xiisaha badan ee ku saabsan madal noocan oo kale ah ayaa ah inaad soo dejisan karto oo si toos ah ugu dari karto boggaaga, codsigaaga ama shabakadaada bulshada hab raaxo leh, fudud oo aad u degdeg ah.
Shaki la'aan waa yaab oo aadan ka maqnaan karin, gaar ahaan haddii aad isku aragto qof wax badan ka shaqeeya nooca faylka ama qaabkan. Hab cusub oo lagu helo maaweelo internetka taasina waxay mar hore noqotay moodada isticmaalayaasha.
Mabda 'ahaan wuxuu ahaa saldhigga kiiboodhka oo ay ku jiraan faylalka noocaan ah si loola wadaago isticmaalayaasha kale. Laakiin hadda, waa qayb ka mid ah madal GIFS online ah oo ay si weyn u adeegsadaan kuwa la falgala internetka. Waxay leedahay liis balaadhan oo ah qaybo aad u kala duwan oo ay ka mid yihiin, Intaa waxaa dheer, iyada oo aan la sii socon, sidoo kale waxay leedahay browser ballaaran, waa cunsur aad u xiiso badan haddii aad ka shaqeyso shabakadaha bulshada oo aad u baahan tahay kumanaan iyo kumanaan faylal iyo qaabab ah.
Marka la soo koobo, kuwani waxay ahaayeen qaar ka mid ah bogagga ugu fiican ee bilaashka ah ee aad kala soo bixi karto GIFS, iyo hal gujin oo keliya.
Hagaajinta GIF waa hawl fudud, waa ku filan inaad haysato qalabka lagama maarmaanka ah si loo sameeyo. Sida aan soo sheegnay, uma baahnid kharash gaar ah, kaliya haddii ikhtiyaarkaagu yahay inaad ku sameyso Photoshop.
Mar dambe ma haysatid cudur daar aad ku joojinayso isticmaalka walxahan shabakadaha bulshada, tan iyo markii aad ku mahadsan tahay iyaga, waxaad awoodi doontaa inaad qabato dareenka daawadayaasha oo dhan.
Waxaan rajeyneynaa inaad wax badan ka baratay qaabkan oo kale, kaas oo aad ugu badan naqshadeeyayaasha, abuurayaasha boggaga internetka, suuqgeynayaasha, iwm. Waxaas oo dhan ka sii sarreeya, waxaan sidoo kale rajaynaynaa in casharrada yar ee aan hindisnay ay adiga wax weyn ku tari doonto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida loo hagaajiyo GIF
Tusaalooyinka calaamadaha dugsiga